Ndezvipi Zvinhu Zvaungawedzera Kuti Uvandudze Mawiricheya Emagetsi? | Karman® Mawiricheya
The akanakisa maficha kuwedzera kumagetsi wiricheya angave iwo anowedzera wiricheya kufamba uye tendera iyo wiricheya kushandira huwandu hwakawanda hwezvinangwa. hwiricheya vashandisi vakatarisana nemabasa ezuva nezuva ayo ave musoro nekuda kwekushayikwa kwe kufamba kana wavo mawiricheya anoita kwete kushandira icho chinangwa chaicho.
Nyaya hombe ye vanoshandisa wiricheya harina nzira dzakaringana dzenzira dzimwe nguva kuti upfuure uye kunyangwe zvidiki zvidiki zvemabasa zvinogona kusanganisira kusvika kunzvimbo kushandisa nzira nhete inova inenge hazviiti. Chinhu icho inobvumira mawiricheya kugadzirisa upamhi kunobatsira zvakanyanya nekuti husiku ihwohwo hwekutambura kuenda kune imwe nzvimbo hwaizogadziriswa.
Kufanira kuenda kutenderera mukati wiricheya yemagetsi izvo hazvipinze chero kuvhunduka uye nokudaro zvinoita chero kutasva kusagadzikana kunyanya munzvimbo dzisina kuenzana. Chinhu chinenge chiri chekubatsira kukuru kuti uve nerutsoka kutasva ichave yekumisa system inobvumidza vhiri rega kusimudzira zvakanyanya zvinogoneka kana uchipfuura mabundu.
When in wiricheya zvakaoma kwazvo kusvika pazvinhu zvakaiswa pamusoro pemasherufu epamusoro uye kunyangwe pamakonetera nekuda kwe mavhiripu kuve wakaderera. Chinhu chinobatsira kugadzirisa nyaya iyi kungave kuisa kumisikidzwa kwemagetsi ekumisa iyo inobvumidza iyo wiricheya yemagetsi kukwidza kusvika pakukwirira kwaunoda. Izvi zvaizoita kuti kusvika kwezvinhu zvive nyore uye wiricheya vashandisi vaizokwanisa yose basa pasina kutya kwechimwe chinhu chinowira pavari nekuda kwekutambanudzira ruoko kuti uvadhonze.
wiricheya vashandisi havana sarudzo uye vanofanirwa kugara kwemaawa mazhinji mukati mezuva uye izvo zvinogona kusagadzikana kune vakawanda kunyanya kana makushoni asiri iwo akasununguka ivo pachavo. Iyo zvinhu kushandiswa pa mavhiripu batsira kuburitsa kupisa kwemuviri asi uchiri kugona kusagadzikana pamazuva anopisa. Chinhu chinobatsira kugadzirisa nyaya iyi chingave recliner sarudzo saka kana vashandisi vaneta nekugara vanogona kutsenhama uye voregedze kumanikidza kubva kumisana yavo uye kumagumo ezasi.
Ichi chiitiko chinobatsirawo kumisikidza kupisa kwemuviri mukati mechikamu chakakura chemuviri panzvimbo pekupedzisira kumashure chete. Izvo hazvingori chete musuru kubatsirwa asi hutano kubatsirwa futi. Iyi ficha inogona kubatsira kudzivirira hunyoro huchivharirwa nekuda kwekugara kwenguva refu dzinogona kukonzera utachiona kana kuputika. Kugona kubva pakugara kusvika pakuradzika zvinogona kubatsira kudzivirira kushushikana uye kuwedzera kumhanya newiricheya mushandisi kujairira magetsi wiricheya.